ချစ်သူမောင်: January 2009
Good luck for you all..... Click on your Chinese zodiac sign or birth year below and haveapeek at your fortune: Career, Money, Love and Health in 2009, in the year of Ox. Rat Cow Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Chicken Dog Pig 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 စာရေးသူ
အကောင်းဆုံးမြန်မာဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီဆု(၂ဝဝ၈)ခုနှစ်တွင် ဆုရရှိသူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) ဘာသာရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Religious Blog ) - မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဘလော့ဂ်
(ခ) ပညာရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Education Blog ) - မသက်ဇင် ဘလော့ဂ်
(ဂ) နည်းပညာ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Blog About Blogging ) - ညီလင်းဆက် ဘလော့ဂ်
(ဃ) နိုင်ငံရေး ဘလော့ဂ်ဆု (Best Political Blog ) - နစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်
(င) သတင်း ဘလော့ဂ်ဆု (Best News Blog ) - ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ဘလော့ဂ်
(စ) ပရဟိတ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Charity Blog ) - ပိုကောင်းမယ့် မနက်ဖြန် ဘလော့ဂ်
(ဆ) မြန်မာစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Myanmar Literature Blog ) - ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း
(ဇ) ရသစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Literauture Blog ) - မင်းဒင် ဘလော့ဂ်
(ဈ) ကဗျာ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Poem Blog ) - ကောင်းကင်ကို ဘလော့ဂ်
(ည) အစုအဖွဲ့ ဘလော့ဂ်ဆု (Best Association Blog ) - ကိုမိုးသီး ဘလော့ဂ်
(ဋ) အထွေထွေ ဘလော့ဂ်ဆု (Best General Blog ) - နိုင်းနိုင်းစနေ ဘလော့ဂ်
အမှတ်တရတွေရင်မှာသိမ်းစု ရတနာလိုဥကာထားခဲ့ တနေ့တရက် အတွေ့ခက်ယင် လွမ်းရက်ရာထောင်ဝေတယ်ခင် ဆိုတဲ့စာသား စကားတွေရယ်.......ပြန်ပြောယင်တမင်ဆန်းတာလို့ ထွင်ပြောတယ်ထင်ချင်ထင်မယ် တကယ်သာဆိုချစ်တဲ့ညလေး ဘယ်ကိုလဲလို့တွေးနေယင်း အမှတ်တရအဖြစ်တွေနဲ့ အမြတ်မရတဲ့အဖြစ်တွေပါကွဲ့.......... လွမ်းတယ်လို့မပြောသာပေမယ့် လွမ်းချင်နေတာရင်ကသိ ဒီလိုပိုအေးတဲ့နှစ်တွေဆို တခါတခါတော့လည်းငယ်ဘ၀ကိုသတိရ မီးကိုတမ်းတမိသယောင် အပြာရောင်မီးခြစ် အ၀ါရောင်လေဒီရှုးပုံရင်ထိုး ငွေဆွဲပြားလေးတစ်ခု အမြတ်မရပေမယ့်အမှတ်တရ......... ချစ်တဲ့ ညလေး ဘယ်ဆီပြေးထွက် အလွမ်းရက်ရှည်ကြာ နွမ်းမောလျဝေဒနာတွေ ရင်မှာတင်းကျပ် အလွမ်းဇတ်အလား ထင်ယောင်မြင်မိမှား သောကဖြစ်စေသောဝေဒနာများ........ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်တော့ချစ်ခဲ့တဲ့ တချိန်ကယောရှီဒါနဲ့ ချစ်ခဲ့တယ်ထင်တဲ့ ကေလေးကိုလည်းသတိရ အမှတ်တရအားလုံး ရင်မှာစုနေ အတွေးတွေမတွေဝေချင်........... လွမ်းသည်ရင်က အမှတ်တများ၏ ဒါဏ်ရာတချို့ ပြန်လည်ကာမတူးဆွချင်ပေမယ့် မှတ်မိနေတဲ့အသိက ရင်မှာငြိနေပေါ့ မန်မိုရီစတစ်လို ဖြစ်နေယင်လည်းအကောင်းသား အားလုံးကိုပယ်ဖျက် တွယ်မက်မနေချင်ပေမယ့်.......... လွမ်းတယ်ဆိုတာ ခံစားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ် နွမ်းလျလျရုပ်နဲ့ မောလျတဲ့ရုပ်.......... ။ ။ ချစ်သူမောင်
အချစ်ဆိုသည်အလွမ်းဆီတွင်ပျော်မွေ့လေသောစိတ်ဒါဏ်ရာအမာရွတ်.......သစ္စာမရှိခြင်းလည်းမဟုတ်ချင်အလွမ်းရင်ခွင်သည်လည်းအချစ်၏စေစားရာအရုပ်အလားပီပီပြင်မရှိခဲ့...........ချစ်တတ်ခဲ့လေသောအကြောင်းတရားတို့သည်ကား ပညတ် ပရမတ်ခွဲခြား၍မရခဲ့........တွယ်တာနှောင်ရစ်ချစ်တတ်ခဲ့သောနှလုံးသား၏အကြောင်းတရားတို့သည်ကားစိတ်ဝိဥာဉ်၏စေစားရာ.........ဝေဒနာများစွာဖြစ်သောရင်ခွင်အစုံသည်ကားစေတသိက်၏ဘဏ်တိုက်....... အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရာချစ်တတ်သော နှလုံးသားသည်အလွမ်းအစုစုတို့၏သိုမှီးသိမ်းဆည်းရာ.........လတ်တလောချစ်ခင်နှစ်သက်ရာအကြောင်းတရားတို့သည်လည်းသစ္စာတရားတို့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ရာနေရာမဟုတ်ခဲ့........ ရင်းနှီးမှုအကြောင်းအရင်းခံဖြစ်တည်မှု အရာအားလုံးရင်ခွင်မှာစွဲနစ်စွာ ဖြစ်တည်တတ်သောရင်ခုန်လှိုက်မောမှုတို့အားခုံမင်တပ်မက်နေခြင်းလည်းမဟုတ်........သို့သော် ချစ်သည်တစုံတစ်ယောက်ကိုရင်းနှီးစွာရယူပိုင်ဆိုင်လိုမှုမပါ အဖြူထည်သက်သက်ချစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တည်ရာထိုမြေကမ္ဘာသည်ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်ပြည့်စုံသောအလွမ်းတရားတို့ကင်းဝေးသောအဖြူရောင်ကမ္ဘာလေးသည်ကျွန်တော်၏ပျော်မြူးရွှင်ပျ လန်းမြသောနေရာသာဖြစ်ပါစေမောင့်သခင်...။ ။ စာရေးသူ
HAPPY NEW YEAR !!!!! 2009 နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းအားလုံးပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ။စိတ်ကူးအိပ်မက် နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါ စေ.........ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အပြာရောင်ဘ၀လေးတွေ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်...ချစ်ခင်စွာဖြင့်ချစ်သူမောင်
Side effect of Social network
သည်လိုခေါင်းစဉ်တပ်လျှင် ချက်ချင်း facebook တည်းဟူသော လူမှုကွန်ယက်ကြီးကိုပြေးမြင်မိမှာ အသေချာဖြစ်သည် ။တကယ်တော့ အယင့်အယင်တည်းကရှိခဲ့သော...
ဤသို့ကခုန်ကြသည် ဤသို့အနောက်ဆန်ကြသည် အောက်ကပုံလိုရေပင်မရောကြတော့ ဤသို့ကျက်သရေရှိ...
ချစ်​သည်​သခင်​ ​မောင့်​ရင်​ခွင်​မှာ ​နေရာယူထား ဘဝရဲ့ အစိတ်​ပိုင်းမှာ အတူရှိ​နေချိန်​ ​တော်​​တော်​များများမှာ အ​ပျော်​ဆို...
ဖြူနီဝါပြာ​ရောင်​စုံ အ​ရောင်​​နှောလို့ အ​ရောင်​စုံ​အောင်​ စိုက်​ထားတယ်​ ပန်း​ရောင်​စုံ​တွေ အပြိုင်​ပွင့်​လို့ တင့်​လှ​သာ​မော ရ...
ညီမလေးရေ.... မင်းမရှိတဲ့နောက် ဘ၀မှာလေ အစားထိုးမရခြင်းများစွာနဲ့ပေါ့ကွယ် တခွန်းတည်းပြောချင်တယ် အရမ်းလွမ်းတယ်လို့ ရင်မှာခံစားဝေဒနာ...
ဒီနေ့တော့ကဗျာလည်းမရေးဖြစ်ပါဘူးသူငယ်ချင်းတွေအတွက်လက်ဆောင်လေးတွေစီစဉ်ထားတယ် သိချင်ယင် Android phone or I phone က Neo reader ဒါမှမဟုတ် Barcod...
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး နှင့် မဟာသင်္ကြန်
ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ် သင်္ကြန်ကာလမို့ဥပုသ်လည်းစောင့်မနေနိုင်ပါဘူး ဒီနှစ်သင်္ကြန်အလွန်ပဲစည်ကားလှပါတယ်။ထို့အတွက်လည်းမြန်မာပြည်...
အလွမ်း ဒီတစ်ညတော့ လွမ်းခွင့်ပြုပါ ရင်ကချစ်တဲ့ မောင့်သခင်ရေ..... ခင်ရေ...သက်ထား အဝေးကို ခဏသွားတော့ မောင် နေမရ.... တစ်ကယ်ဆို စက္ကန့်ေ...
့ လူဆိုတာတစ်ကယ်တော့ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ထက်သာတာ အချက်သုံးချက်တည်းရှိသတဲ့...... တစ်အချက်က အကျိုးအကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းတဲ့ ...
နင့်နင့်သည်းသည်း ခွဲခွာမှုရဲ့ဒါဏ် ရင်မှာဒါဏ်ဖြစ် နာကျင်လျှက်သာ နေမည်ထင်လား ခင်သက်ထားရေ ချစ်လျှက်လွမ်းသော် အလွမ်းပျော်ဟု မော...
နစ်ခဲ့မိသည် ခဏဆီတွင် ဇမ္ဗူ ခွင်၌ သူသာပင်ရှိ အတွေ့အထိ အပွေ့ကြည့်တို့ မွေ့လျော်စေသော လောင်မြိုက်စေသည့် ချစ်သူ့ရင်ခွင်မဟုတ် တပ်မက်မှု၏စေရာ...... တမ်းတစရာမလို နွမ်းလျခြင်းတွေသာပိုကဲ မျက်ဝန်းထဲမှာ ခဏတာတပ်မက်စိတ် ဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်မလား ဘာစိတ်မှမရှိပါပဲ တစ်ခါက နှောင်ဖွဲ့ သံယောဇဉ်ရေစက် အခက်ပွေရတက်ဝေစေသား...... ဖောက်ပြန်ခြင်းမဟုတ် အရုပ်တစ်ရုပ်လို ပွေ့ဖက်ညံ့သက် အလွမ်းရက်မရှည်ချင် သောကပွေချင်ပွေ လောဘမဝေချင် အနမ်းတစ်ချက် တမ်းတစ်သက်တာ နှောင်တွယ်လေရစ်မလား....... အမှောင်နယ်လွန်ကျူး သေအံ့မူးမူးစိတ် ခြေဆန့်ရူးရပါလိမ့် တပ်မက်မိခြင်းဝေဒနာ ရင်မှာ ပါလာမှာစိုးကြောက် ဘ၀ရဲ့မှောက်မှားမှု ခြောက်ခြားစရာ ရင်မှာစုနေ ဖြေမဆည်သာသောအရိပ် ရင်မှာနှိပ်စက် အခက်ပွေနေ့ည သောကသာဗျာများနေခဲ့..........။ ။
MY SERCH ENGIN
♪ အင်တာနက်ကို အချိန်သက်မှတ်ပြီး အလိုလျှောက်ပိတ်ပေးမယ့် - AutoData v2.04 APK ♫
Does Technology ruin Arts?
ပျိုမေ - မောင်တို့ အသုံးဝင်စေဖို့
သံယောဇဉ်တွေ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ စောင့်နေမယ်..
blogger post body ကို ဖျောက်လိုသော်
MY OPENING MIND
အိပ်မက်နဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာ - ၃ -
sOmE wOrDs4sOmE1
ကြီးကျယ်တာတော့ဟုတ်ပါဘူး သုံးစရာရှိလို့ကော်ပီယင် ချစ်သူမောင်ဘလော့က နေကူးယူဖေါ်ပြတယ်ဆိုတာလေးထည့်ပေးယင်ကျေနပ်ပါတယ်
After 9463 person
"ရင်မှာအမြဲတမ်း...တမ်းတ....သတိရ...စေမယ့်....မှတ်တမ်း ...လေးတခုပါ "
chitthumaung by www.chitthumaung.com is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 United States License.Based onawork at www.chitthumaung.blogspot.com.